Taliyihii hore ee ciidamada Asluubta Soomaaliyed oo Maxkamadda Ciidamada Qalabka side oo xukun ku riday
Taliyihii hore ee ciidamada Asluubta Soomaaliyed oo Maxkamadda Ciidamada Qalabka side oo xukun ku riday, kadib Markii uu Xabsiga ka daayay Rag fara badan oo Al-Shabaab ah.
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun adag ku riday taliyihii hore ee ciidamada Asluubta Soomaaliyed Jen. Cabdi Maxamed Ismaaciil iyo eedeysanayaal kale ka dib markii lagu helay dembiyo lagu soo eedeeyey.
Jen. Cabdi Maxamed Ismaaciil Taliyihii hore ee ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyay qiyaano Qaran oo uu u adeegsaday darajadii uu hayey kadib markii uu si sharci daro ah uga sii daayay xabsiga dhexe ee Muqdisho oo uu taliye ka ahaa ilaa 14 nin oo Al-Shabaab ka tirsanaa kuwaasoo horey ay maxkamadu xukunno ugu riday halka qaar kalena uu siiyey darajooyin ciidan aqoonsi.
Gudoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada Somalia Liibaan Cali Yarrow ayaa sheegay in maxkamadu ay ku xukuntay taliyihii hore ee ciidamada dowlada asluubta xabsi daa’in iyadoo ay u dheer yihiin arimo ay ka mid yihiin in laga xayuubiyo darajada, lagana saaro guud ahaan ciidamada iyo inuusan xil dambe ka qaba Karin dowlada.
"Maxkamadu waxay sidoo kale ku xukuntay shan sanno oo xarig ciidan ah. agaasimihii garsoorka maxkamadda ciidamada Xasan Liibiya oo isna lagu helay inuu gacan ku siiyay taliyihii hore sii daynta maxaabiista Al-Shabaab u badan" ayuu intaa ku daray gudoomiyaha maxkamada ciidamada.
Sidoo kale maxkamada ayaa xukuntay inuu dhameysto xukunkiisa oo gaarayey 8 sano ee xarig ah mid ka mid ah maxaabiistii Al-shabaab ee taliyihii hore uu sii daayey oo la soo qabtay, dhinaca kalena maxkamadu waxay sii deysay askari ka tirsanaa ciidamada dowlada ka dib markii loo waayey cadeymo ku filan dembi lagu soo oogay oo ahaa inuu dilay askari kale.